Leader In Me – Limits X
Available For Schools in Myanmar!
Rated by Parents & Teachers.
Feedbacks for Leader In Me
Leader In Me သည် သက်သေအထောက်အထားများကိုအခြေခံ၍ ကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးကို အဖက်ဖက်မှတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးသောစနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစနစ်တွင် ကျောင်းနှင့်ထိစပ်နေသော သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်ရပြီး တန်ဖိုးရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဝိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Leader In Me အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အနာဂတ်စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်အောင်မြင်နိုင်သော လူကောင်းလူတော်များနှင့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
Leader In Me စနစ်ကိုစတင်ခဲ့သော ရည်ရွယ်ချက်များ။
Leader In Me စနစ်သည် နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော်တွင် လက်ရှိအသုံးချနေသော စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေးတွင် ကမ္ဘာ့အကောင်းလို့သတ်မှတ်ခံထားရသော Finland, Singapore နှင့် South Korea နိုင်ငံများရှိ အစိုးရကျောင်းများတွင်ပါ အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ၁၂ ကျောင်းတွင် အသုံးပြုနေပါသည်။
Leader In Me စနစ်ကို စတင်ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းများကို ကျောင်းတည်ထောင်သူများက ရှင်းလင်းပြောပြထားပါသည်။
Snow Queen ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း
"ပညာရေးဆိုတာ လူငယ်တစ်ယောက်ချင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေကို ပေါ်ထွက်လာအောင်နဲ့ သူတို့ဘဝကို သူတို့ဦးဆောင်တတ်အောင်သင်ပေးရမှာ။ အားလုံးကို ပုံစံတူသင် ပုံစံတူမေးနေရင် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းတွေကို မျက်ကွယ်ပြုရာရောက်ပြီး၊ တီထွင်ဖန်တီးချင်စိတ်၊ သိချင်စိတ်နဲ့ သင်ယူချင်စိတ်တွေကို ဖျက်ဆီးသလိုဖြစ်နေတယ်။ ကလေးတွေကို အနာဂတ်အတွက် တကယ်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးချင်တယ်ဆိုရင် ကလေးတွေအပေါ်မြင်တဲ့အမြင်နဲ့ ကျောင်းတွေရဲ့ လုပ်ကိုင်ပုံတွေကို ပြောင်းလဲပြစ်ရမယ်။
စံနမူနာ ယူရမယ့်ကျောင်းတွေက ကမ္ဘာပေါ်က နိုင်ငံအများစုမှာရှိတဲ့ Leader In Me ကျောင်းတွေပဲ။ Leader In Me ကျောင်းတွေမှာ တကယ်စစ်မှန်ကောင်းမွန်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကို လက်တွေ့ကျကျမြင်တွေ့ရနိုင်တယ်။ ကျောင်းသူ/သားနဲ့ ဆရာ/ဆရာမ ၁ ယောက်ခြင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေကို ဖေါ်ထုတ်ပေးနိုင်နေတာတွေ့ရတယ်။ ပညာရေးကိုပြောင်းလဲဖို့က အပြင်ကနေစလို့မရဘူး။ ကလေးတစ်ယောက်ခြင်းကနေ၊ ကျောင်းကနေ၊ Leader In Me ကနေစရမှာပါ။"
Sir Ken Robinson, International Advisor on Education and New York Times bestselling author of The Element: How Finding Your Passion Changes Everything
Leader In Me ကျောင်းတွေမှာ ဘာလုပ်တာလဲ။
သုတေသနတွေအရ နိုင်ငံတကာတွင်ရှိသော ကျောင်းများရင်ဆိုင်ရသော စိန်ခေါ်မှု ၃ ခုရှိသည်။
(၁) Academics - မကြာသေးခင်က စာကိုအလွတ်မှတ်နိုင်သော ကျောင်းသားသည် အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် လက်ရှိအချိန်တွင် Information သည် Internet ပေါ်တွင် အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပြီ​ဖြစ်သောကြောင့် Problem Solving Skills and Analyitical Skills တွေသည် ပိုမိုအရေးကြီးလာပါသည်။
(၂) Culture - အဖွဲ့အစည်းတိုင်းတွင် ထူးခြားသောဓလေ့နှင့် ပြုမူဆက်ဆံပုံများရှိပါသည်။ သို့သော် ကျောင်းများတွင် ကျောင်း Culture ကို စနစ်တကျတည်ဆောက်ခြင်း လွန်စွာပင်အားနည်းသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ကျောင်းတွင်း ဆရာ/ဆရာများပြဿနာများ နှင့် ကျောင်းသား/သူများပြဿနာများ များပြားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
(၃) Leadership - ကျောင်းများတွင် ကျောင်းသား/သူများသည် ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံ နည်းပါးပြီး လူနည်းစုသာ အခွင့်အရေးရကြသည်။ အလုပ်ခွင်ကိုဝင်ရောက်လာသော လူငယ်များသည် အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် လိုအပ်ချက်များစွာရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
ဒီလိုအပ်ချက် ၃ ခုကို Leader In Me ကျောင်းများတွင် စနစ်တကျ တစ်နှစ်ပတ်လုံးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါသည်။
Academics, Culture & Leadership ၃ ခုလုံးကို မျှတအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် လူကောင်းလူတော်များနှင့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းများမွေးထုတ်ပေးနေသောကျောင်းများဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆရာ/ဆရာမများအတွက်လည်း ပိုမိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်လာသောကြောင့် အားလုံးအတွက် Win-Win ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ Leader In Me ကျောင်းများ
Leader In Me Courses
Leader In Me ကျောင်းရှိ ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား/သူများ အတွက်သင်တန်းများ အားလုံးကိုအောက်တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
70 000 Ks
7 Habits of Highly Effective People (Foundation)
နှစ် ၁ ရာ အတွင်းမှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Personal Development Book လို့ သတ်မှတ်ခံထားရသော7Habits of Highly Effective People ၏ စာရေးသူ Dr. Stephen Covey ကိုယ်တိုင်ပြုစုထားသော သင်တန်း။
Foundation of Leader In Me
Leader In Me အကြောင်းကို Leader In Me ကျောင်းများမှ ဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား/သူများ နှင့် မိဘများအားလုံး နားလည်သဘောပေါက်နိုင်အောင် ရှင်းလင်းပေးထားပါတယ်။
Kindergarten ကျောင်းသား/သူများအတွက် သင်ခန်းစာ ၃၈ ခု။
LIM (Level 1)
Level 1 ကျောင်းသား/သူများအတွက် သင်ခန်းစာ ၃၈ ခု။
LIM (Level 2)
Level2ကျောင်းသား/သူများအတွက် သင်ခန်းစာ ၃၈ ခု။
LIM (Level 3)
Level3ကျောင်းသား/သူများအတွက် သင်ခန်းစာ ၃၈ ခု။
LIM (Level 4)
Level4ကျောင်းသား/သူများအတွက် သင်ခန်းစာ ၃၈ ခု။
LIM (Level 5)
Level5ကျောင်းသား/သူများအတွက် သင်ခန်းစာ ၃၈ ခု။
LIM (Level 6)
Level6ကျောင်းသား/သူများအတွက် သင်ခန်းစာ ၃၈ ခု။
LIM (Level 7)
Level7ကျောင်းသား/သူများအတွက် သင်ခန်းစာ ၃၈ ခု။
LIM (Level 8)
Level 8 ကျောင်းသား/သူများအတွက် သင်ခန်းစာ ၃၈ ခု။
LIM (Level 9)
Level9ကျောင်းသား/သူများအတွက် သင်ခန်းစာ ၃၈ ခု။
Leader In Me @Home (Teens)
Leader In Me @Home (Juniors)